Digital Patrika – शोक मग्न मलेठ ! अधिकांश घरमा जलेन चुल्हो प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्–गाउँ छिरेर प्रहरीले गाउँलेलाई गोली ठोक्यो
| Wednesday, 20 June 2018
शोक मग्न मलेठ ! अधिकांश घरमा जलेन चुल्हो प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्–गाउँ छिरेर प्रहरीले गाउँलेलाई गोली ठोक्यो
सप्तरीको मलेठ गाविस यतिखेर शोक मग्न छन् । सोमवार राति देखिनै गाउँका अधिकांश घरमा चुल्हो समेत जल्न सकेको छैन । सोमवार मात्रै मधेशी मोर्चा र प्रहरी विच भएको झडपका क्रममा प्रहरीको गोलीलाई यस गाउँका दुई जनाको ज्यान गएपछि यतिखेर सिंगो गाउँनै शोक मग्न हुन पुगेको हो ।
मोर्चा र एमालेका लागि फाल्गुन २३ गते आ–आफ्नो साख र प्रतिष्ठा जोगाउने दिन थियो, तर सप्तरीको मलेठ गाविसका लागि भने यो कालो दिन भनेर आयो । मलेठका अधिकांश बासिन्दाहरु सोमवार अर्थात फाल्गुन २३ गतेलाई कालो दिनकै रुपमा सम्झी राखेका छन् ।
मधेशी मोर्चाको विरोधका विच एमालेको मेचि–महाकालि अभियान राजविराजवाट सारेर मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा लगिने निर्णायसँगै स्थानीयहरु त्रसित वन्न पुगेका थिए । नभन्दै उनीहरुको त्राश वास्तविकता भयो जस्ले गाउँलाई नै दुखित बनाइ दिएको छ ।
प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा मलेठ–२ का २२ बर्षिय सञ्जन मेहता र वडा नम्बर ४ का ५५ बर्षिय पिताम्बर मण्डलको मृत्यु भयो । र, हामी सन्जन मेहताको निवास पुग्दा उनको परिवारको आँशु अझै थामिएको थिएनन् । छोराको मृत्युको खवरले आमा शान्ति देवि पनि छिन छिनमै मुर्छित हुने गर्छिन ।
राजनीतिवाट टाढै रहेको सन्जन ९ महिना अघि मात्रै बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए । सञ्जनको मृत्युको खवर पाए लगत्तै मुर्छा परेकी पत्नी सविता हाल विराटनगर एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भाईको मृत्युको खवरले दाजु रञ्जनलाई पनि हृदयघात भएको पारिवारले दावी गरेका छन् । उनी पनि हाल विराटनगरमै उपचार गराई रहेका छन् । तीन दाजु भाई रहेका सञ्जन आफ्ना आमा वुवाका माईला छोरा हुन् । गाउँकै चौकमा एउटा किराना तथा एउटा पानको पसल सञ्चालन गरेर वसेका वुवा लक्ष्मण मेहताको व्यवसायलाई दुवै दाजुभाई रञ्जन र सञ्जनले समेतले सहयोग गर्दै आएका थिए । अन्य दिन झै सोमवार पनि पसलवाट दिउँसो खाना खान आएको सञ्जन खाना खाएर पसल तिर गईरहँदा प्रहरीको गोलीको शिकार भएको वुवा लक्ष्मण बताउँछन् ।
विविएससम्म पढेका छोरालाई कतै जागिर लगाउने सोच रहेको वताउँदै लक्ष्मणले भनेका छन् ‘विधाताले ठूलो खेलवाड गरेको छ । र, मृतक अर्का ५५ बर्षिय पिताम्बर मण्डल को घर हो यो ।
पारिवारीक आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको पिताम्बरसँगको परिवारसँग घर वनाउने जग्गा समेत रहेको छैन । गाउँकै सडक छेउमा १० धुर एैलानी जग्गामा टिनको छाना भएको फुसको झुप्रोको पिताम्बरको परिवार बस्दै आएका छन् । ५ जना सन्तानका पिता पिताम्बरको मृत्यु भएसँगै यो परिवार पनि गहिरो शोकमा डुबेको छ उनका दुई छोरा र तीन छोरी । हामी पुग्दा पिताम्बरकी श्रीमती सोमनी देविले भक्कानिदै मनको बह पोखिन् । छोरोको मृत्युको खबरले ७५ बर्षिय गोसाई मण्डल स्तब्ध भएका छन् । न बोल्छन्, न केहि गर्छन्, टुलुटुलु हेर्दै गरेका बृद्ध गोसाईको आँखावाट आँशु भने निरन्तर झरिरहेको छ ।
पिताम्बरका आफन्त एवम् प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आफ्नो घर अगाडी नै पिताम्बरलाई गोली लागेको हो । प्रहरी र मोर्चाको झडप भएको स्थान भन्दा झण्डै २ सय मिटर पुर्व गाउँको भित्री भागमा पिताम्बरको घर रहेको छ । मोर्चाका कार्यकर्तालाई लखेटदै गाउँ पसेका प्रहरीले गोली चलाउँदा उनको निधन भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ ।
दुवैको शव हाल धरान स्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । हिन्दु परम्परा अनुसार शवको अन्तिम संस्कार नगरिएसम्म मृतकको घरमा चुल्हो समेत जल्दैन । छिमेकको बज्रपात हुँदा अहिले यो गाउँ नै उजाड जस्तो भएको छ ।
मृत्यु भएका दुवै जना मध्ये कोही पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक आस्था बोकेका व्यक्ति नभएको गाउँलेहरुको दावी गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी पनि मारिए
सोमवारको घटनामा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाउने आनन्द साह नेपाल सरकारका जागिरे थिए । पेशाले स्वास्थ्यकर्मी रहेको साह सप्तरीकै डिमन गाविस स्थित स्वास्थ्य चौकिमा सिअहेब पदमा कार्यरत रहेका थिए । सप्तरीको परसवन्नी गाविस–४ घर भएका साहको राजविराज–९ स्थित राजदेवी
टोलमा समेत घर छ । उनी आफ्ना परिवार सहित राजविराजमै बस्दै
आएका थिए । सोमवार काम विशेषले बजार गएका साह निकै बेर घर नफर्किपछि
पत्नी अनिताले फोन गरी बजारमा तनावपुर्ण माहौल रहेको सुन्दैछु भन्दै
तुरुन्त घर फर्किन आग्रह गरेको केही समयमै गोली लागेको थियो । र, उपचारको क्रममा धरान लैजादै गर्दा उनको मृत्यु भएको हो ।
दिगम्बरको आफ्नै गुनासो
सप्तरीमा सोमबार भएको घटनामा मारिएका भनिएका दिगम्बर यादवले आफु कसैको पक्ष आन्दोलनमा नउत्रदा पनि गोलीको शिकार बन्नु परेको गुनासो गरेका छन । सप्तरी बारका कोषाध्यक्ष समेत रहेका यादवले अझ मधेसी मोर्चाले आफु पनि मारिएको भनेर विज्ञप्ती जारी गरेकोमा आफु मर्माहत बनेको बताएका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा सोमबार भएको झडप लगत्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चार जनाको मृत्यु भएको विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, मोर्चाले मृत भनेका दिगम्बर यादवको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको रहेछ । दिगम्बर अहिले प्रतिष्ठानको सर्जरी वार्डमा उपचाररत छन् । ढाडमा गोली लागेका दिगम्बर राम्ररी बोल्न र घटनाबारे बताउन सक्ने अवस्थामा छन् । चिकित्सकका अनुसार उनको ढाडको गोली भने निकालिएको छैन । गोली पछि निकाल्दा पनि असर नगर्ने चिकित्सकको जिकिर छ । सप्तरीको बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष समेत रहेका यादवले आफु कुनै पक्षबाट आन्दोलनमा नगएको र कार्यक्रम स्थलबाट एक किलोमिटर टाढा रहेकै अवस्थामा प्रहरीले गोली हानेको बताए ।
प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि ल्याइएका लक्ष्मण यादव, दिनेश साह, जक्कु साह, अरुणकुमार यादव, पशुपति यादव र विरेन्द्र कुमार यादव तथा प्रहरीहरु रमेश मंग्राती र रञ्जीत सिंह उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । जीतेन्द्रकुमार महतो, दिलीप यादव, इन्द्र यादवको पेटमा गोली लागेको थियो । उनीहरुको शल्यक्रिया गरेर गोली निकालिएको छ भने दिगम्बर यादवको भने गोली निकालिएको छैन् । सुरेन्द्रकुमार साह, जीतेन्द्र साह र एमाले कार्यकर्ता धनपती पाठकको उपचार भइरहेको छ । जसमध्ये इन्द्र यादवको अवस्था गम्भीर रहेकाले सर्जरी आईसियुमा राखेर उपचार भईरहेको छ । नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानको विरोधमा उत्रिएका संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुबीच प्रहरीको झडप भएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले लाडीचार्ज गर्दै गोली हानेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको विद्यार्थी संगठन गणतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष बीरेन्द्रकुमार यादवको जिकिर छ । घाइतेहरुको वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले निशुल्क उपचार गराइरहेको छ ।
करिब नौ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा चिनियाँ लगानीको सम्झौता
जोगीराम थारूका तीन पुस्तादेखि सगोलमा बस्दै, ४२ जनाको एउटै चुलो
Archives Select Month June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 September 2016 August 2016 July 2016 April 2016 March 2016 February 2016 December 2015 October 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 February 2014